राजधानी तोक्न रस्साकसी : किन चार प्रदेशले तोक्न सकिरहेका छैनन् राजधानी ? - राजधानी तोक्न रस्साकसी : किन चार प्रदेशले तोक्न सकिरहेका छैनन् राजधानी ?
राजधानी तोक्न रस्साकसी : किन चार प्रदेशले तोक्न सकिरहेका छैनन् राजधानी ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १6 आश्विन, 01:55:58 AM
काठमाडौँ । प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना भइसक्दा पनि चारवटा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । प्रदेश ४, ६ र ७ ले मात्रै आफ्नो नाम र राजधानी तोकेका छन् ।
प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरबाट प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँ राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। नाम पनि थुप्रै चर्चामा छन्। तर, औपचारिक रूपमा प्रदेशसभामा ती विषयले प्रवेश पाइसकेका छैनन्।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
२०७५, १6 आश्विन, 01:55:58 AM
सात प्रदेशका १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने